Okunye umshini carbon fibre
. Weihai tonglian ngokunemba imishini co, ltd itholakala kuleli dolobha elihle elisogwini - Weihai idolobha sifundazwe Shandong. onguchwepheshe ukukhiqizwa zokudoba, imishini igalofu yokukhiqiza, futhi isandiso ngempumelelo ukuthuthukiswa enkulu ububanzi ingilazi tube, nezinye umkhakha carbon tube ivolumu imishini ensimini ekubumbeni. Ngesikhathi esifanayo asekelayo isikhunta core ahlukahlukene, metal izesekeli nokudoba induku izinga okusezingeni eliphezulu.
Inkampani selokhu yasungulwa ngo-2001, ngemva umoya nemvula eshaweni, tempering, okuthembekile umkhiqizo izinga nobuqotho idumela inkonzo, ukuba abe i-professional kunazo umholi umkhakha. Umkhiqizo ethengiswa kakhulu kunazo ezweni bese zithunyelwa Japan, France, Syria, India, eVietnam, Taiwan nakwamanye amazwe kanye izifunda, isabelo emakethe nezimboni phezulu.
intando Tonglian ukubuyela sikhulisa "Tong Lian" ukhule sturdily enhlabathini evundile sengqondo lapha, nemikhiqizo ezintsha, eliphezulu futhi umqondo omusha zesevisi, isevisi embonini yokudoba zasekhaya kanye nezinye izimboni esiyinhlanganisela ipayipi umakhi, zokuthuthukisa ukuthuthukiswa embonini!
2018 is unyaka kuwufanele ngabomvu f ...
Ekuqaleni konyaka, kube kwangenisa kungaba isiqalo esihle. Ekuqaleni kwalo nyaka, inkampani wazakhela lomdwebo omusha othomathikhi umshini lacquering imodeli. Le modeli yakhelwe lacquer ukucubungula. It cha ...
Thina iwine isihloko "lunye ...
Ngo-September 19, 2016 e Weihai umqondisi edolobheni bureau tsai, umqondisi omunye on-the-spot uphenyo ibe yizimiso zami, wavakashela embonini yethu ngokuningiliziwe imishini induku yokukhiqiza workshop, isikhunta yokukhiqiza workshop wo ...